ကျောင်းဆရာ ဆရာမတွေ ထွက်ပြေးခဲ့တယ်ဆိုတာ မဟုတ်ကြောင်း အာဏာပိုင်တွေပြော
ကျောင်းဆရာ ဆရာမတွေ ထွက်ပြေးခဲ့တယ်ဆိုတာ မဟုတ်ကြောင်...
23 ส.ค. 2561 - 22:32 น.
မောင်တောအာဏာပိုင်တွေ မီဒီယာနဲ့ တွေ့ဆုံ
အာဆာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းက အစိုးရ ကျောင်းဆရာ ဆရာမတွေ၊ ဒေသခံတွေ ထွက်ပြေး နေတယ်ဆိုတာဟာ သတင်းမှားဖြစ်တယ်လို့ မောင်တောခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ်လ ၂၁ ရက်၊ ၂၂ ရက် တွေမှာ ကျောင်း ဆရာ ဆရာမတွေရဲ့ အစည်းအဝေး ရှိခဲ့ပြီး ဘူးသီတောင်၊ မောင်တော မြို့နယ်တွေထဲ ရှိတဲ့ အလယ်တန်း ကျောင်း ၁၇ ကျောင်းက တာဝန်ကျ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ အဲဒီ အစည်းအဝေး လာတက်ကြတာကို လုံခြုံရေး စိုးရိမ်ရလို့ ထွက်ပြေးကြသယောင် သတင်းမှားမျိုး ထွက်လာခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးက ရှင်းပြပါတယ်။
မောင်တောမြို့နယ်ထဲ လုံခြုံရေး အင်အားအပြည့်နဲ့ နေ့ရောညပါ အကာအကွယ် ပေးနေတယ်လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။
စစ်တွေမြို့နယ်က မွတ်ဆလင် ဒုက္ခသည်တွေ မူရင်းနေရာတွေမှာပဲ ပြန်နေလို
ရဲတပ်ဖွဲ့မှာ အဆင့်မြင့်ရာထူးတွေ အပြောင်းအလဲလုပ်
မောင်တောခရိုင် ဒုတိယ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးရဲထူးလည်း အများ ပြည်သူတွေ အကြား လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်စိတ်တွေ ရှိနေတာကို နားလည်တယ်လို့ ပြောရင်းမှာပဲ မသင်္ကာ စရာတွေ တွေ့ရင် တာဝန်ရှိသူတွေကို သတင်းပို့ တိုင်ကြားတာမျိုးလို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်တာတွေ ပြုလုပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
မောင်တောခရိုင် ရဲမှူးကြီး ထွန်းမြင့်ထွန်း
ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ တွေ့ရတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ
လှဖိုးခေါင် ကြားစခန်း အနီးက ရဲကင်းစခန်း
မောင်တောမြို့ပေါ်မှာ နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့တွေက မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေ၊ ကားတန်းတွေ အသုံးပြုပြီး လှည့်ကင်းတွေ နာရီ အပိုင်းအခြားလိုက် ပြုလုပ် ပေးနေတာ တွေ့ရတယ်လို့ အဲဒီမှာ ရှိနေတဲ့ ဘီဘီစီ သတင်းထောက်က ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့နှစ် ဩဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တုန်းက အာဆာ လက်နက်ကိုင်တွေဟာ နယ်ခြားစောင့် ကင်းစခန်း ၃ဝ ကျော်ကို ချိန်ကိုက် တိုက်ခိုက်လာ ခဲ့ပါတယ်။
ည သန်းခေါင်း အချိန် သေနတ်သံတွေ ထွက်ပေါ် လာခဲ့သလို၊ မြို့ပတ်ပတ်လည်ကနေ မီးခိုးတ အူတက်လာခဲ့ပြီး မိန်းမတွေ၊ ကလေးတွေရဲ့ အော်ဟစ် ငိုယိုသံတွေနဲ့ တမြို့လုံး အနှံ့ ဆူညံ နေခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံ တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ဦးလှရွှေက ပြန်ပြောင်း ပြောပြပါတယ်။
စစ်တွေမှာ စစ်ကားတွေ ကင်းလှည့်
မောင်တောမြို့နယ် ရွှေဇာကျေးရွာအနီး စစ်ဆေးရေးဂိတ်
ဒီလို ၂၅ ရက်ည သန်းခေါင်းယံ တိုက်ခိုက်မှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဂယက်ဟာ နောက်ရက် အတန်ကြာအထိ ဆက်လက် ရိုက်ခတ် နေခဲ့တယ်လို့ ဦးလှရွှေက ပြောပါတယ်။
အနီးနား ကျေးရွာတွေကနေ မောင်တောမြို့ပေါ် ရောက်လာကြသူတွေ၊ မောင်တောကနေ စစ်တွေမြို့ပေါ်ထိ တက်ပြေးသူတွေနဲ့ အခြအနေဟာ ရှုပ်ထွေး နေခဲ့တယ်လို့ ဦးလှရွှေက ဆိုပါတယ်။
အခုလို နှစ်ပတ်လည်ချိန်မှာ တိုက်ခိုက်မှုတွေ တကျော့ပြန် ပေါ်ပေါက် လာလေမလား ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှိနေသလို၊ အာဏာပိုင်တွေ ဘက်ကလည်း လုံခြုံရေး အထူး တိုးမြှင့် တင်းကျပ်ပေးထားတာ တွေ့ရတယ်လို့ ဘီဘီစီ သတင်းထောက်က ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကျောင်းဆရာ ဆရာမတွေ ထွက်ပြေးခဲ့တယ်ဆိုတာ မဟုတ်ကြောင်း အာဏာပိုင်တွေပြော